RBC Radio | Author Archives
Madaxweyne Farmaajo oo Faray Xukuumadda in ay Dabagal ku Samayso Qorshayaashii ay Isku Soo Afgarteen Dowladda Masar
Posted on August 22, 2017 RBC, Wararka
Muqdisho (RBC Radio) Madaxweynaha Jamhuuriyadda Faderaalka Soomaaliya Mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa faray Xukuumadda in ay dabagal ku samayso sidii looga mira dhalin lahaa qorshayaashii ay isku soo afgarteen dowladda Masar. Madaxweynaha oo shir Jaraa’id ku qabtay Garoonka Diyaaradaha ee Aadan Cabdulle ayaa sheegay in booqashada uu ku tagay dalka Masar ay ahayd mid mira […]
Madaxweynaha Soomaaliland oo qalin ku marey dalka Imaaradka Carabta (Video)
Hargeysa (RBC Radio) Afhayeenka madaxtooyadda Soomaaliland, Xuseen Deyr oo shir saxaafadeed qabtay wuxuu sheegay madaxweyne Siilaanyo inuu marey qalin looga sarray qabsin. Siilaanyo oo 81 jir ah ayaa muddooyinkii dambe la hadal-hayay xaaladdiisa caafimaad,laakin afhayeenka madaxtooyadda wuu qirey inuu wanagsan-yahay madaxweynaha qalinkiisa oo kaliya maalin qaateynna uu ku maray dalka Imaaradka Carabta. “Madaxweynaha waxaa lagu […]
Akhriso: 22 Wasiir oo u magacaabay madaxweynaha Galmudug
Posted on August 21, 2017 RBC, Wararka
Cadaado (RBC Radio) Madaxweynaha dowlad-gobolleedka Galmudug wuxuu magacaabay golaha wasiirrada ee maamulka,kuwaaso u badan wasiirradii hore. Saddex dumar ah ayaa ka mid noqday wasiirrada oo 22 xubnood ka kooban. Hoos ka akhriso liiska wasiirrada:- 1- Mudane Cabdi Maxamed Cabdi Wasiirka Cadaaladda iyo Garsoorka 2- Mudane Maxamed Xayir Nuur Wasiirka Arrimaha gudaha iyo dowladaha Hoose 3- […]
Mooshin ka dhan ah ra’iisul wasaare Khayre oo aqalka sare la geeyay
Muqdisho (RBC Radio) Guddoomiyaha golaha Aqalka sare ee federaalka, Cabdi Xaashi Cabdullaahi wuxuu maanta ka hor sheegay fadhi ay yeesheen xildhibaannada in mooshin laga soo gudbiyay ra’iisul wasaaraha xukuumadda,Xasan Cali Khayre. Xildhibaan ka tirsan Aqalka sare wuxuu u sheegay Raxanreeb mooshinka inay soo gudbiyeen xildhibaanno golaha ka tirsan oo dalbanaya ra’iisul wasaaraha inuu hor-yimaaddo si ay […]
Wasiirrada Galmudug oo goor dhow la magacaabay
Cadaado (RBC Radio) Madaxweynaha Galmudug,Axmed Ducaale Geele Xaaf ayaa magacaabay Golihiisa wasiirrada oo ka kooban 52 xubnood kuwaasi oo isugu jira 22 Wasiir 22 wasiir ku-xigeeno iyo 8 Wasiiru dowlayaal,agaasimaha madaxtooyadda ayaa akhriyay magacyada wasiirrada. Golaha cusub waxaa ka soo muuqday inta baddan wasiirradii xukuumaddii hore ee madaxweyne Guulleed. Magacaabista ayaa ku soo aaday xilli maanta […]
Madaxweynaha Soomaaliya iyo Sheekha Al-Azhar oo ka wada hadlay kordhinta deeqaha waxbarashada, dabargooynta xagjirnimada
Qaahira (RBC Radio) Madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo oo maalinkii labaad booqasho ku jooga dalka Masar ayaa maanta tagay Xarunta Al-Azhar Al-Shariif ee magaalada Qaahira, halkaas oo sii diirran uu ugu soo dhaweeyey Imaamka Mu’assasada Al-Azhar Dr. Axmed Al-Dayib. Sheekh Axmed Al-Dayib ayaa sheegay in Mu’assasada Azhar ay ku garab taagantahay Soomaaliya dagaalka ay kula jirto […]
Cosoble: “Madaxweynaha sharciga ah waa anniga”
Posted on August 20, 2017 RBC, Wararka
Muqdisho (RBC Radio) Madaxweynaha xilka laga qaaday ee dowlad-gobolleedka Hirshabeelle, Cali Cabdullaahi Cosoble ayaa ka soo horjeestay go’aanka ay dowladda federaalka ku taageertay go’aanka uu baarlamaanka Hirshabeelle xilka uga qaaday. Xilka qaadista wuxuu ku sheegay inay tahay sharci darro,wuxuuna marka go’aanka dowladda ee ka soo baxay wasiirro xaqiiqo raadib loogu dirray Jowhar ku sheegay mid […]
Madaxweynaha Galmudug oo sheegay inuu soo celinayo wasiirradii hore
Cadaado (RBC Radio) Madaxweynaha dowlad-gobolleedka Galmudug, Axmed Ducaale Geelle (Xaaf) ayaa Baarlamaanka maamulka maanta ka hor sheegay inuu soo celinayo xukuumadda hore ee madaxweyne Cabdikariin Guulleed. Hadalkan ayaa markiiba waxaa ka soo horjeestay qaar ka mid ah xildhibaannada Baarlamaanka Galmudug. “Waxaan codsanaya in Baarlamaanka uu ansixiyo xukuumaddii hore .”ayuu yiri madaxweyne Xaaf oo marka sheegay inuu magacaabayo kaliya […]
Wasiir Xoosh oo la kulmay Guddiga Baarlamaanka ee La-socodka Dib-U-Eegista Dastuurka
Muqdisho (RBC Radio) Wasiir Arrimaha Dastuurka ee Xukuumadda Federaalka Soomaaliya Mudane Cabdiraxmaan Xoosh Jibriil oo ay wehliyeen Agaasimaha Guud iyo La-taliyayaal ka tirsan Wasaaradda ayaa maanta la kulmay Guddiga Baarlamaanka ee La-socodka Dib-U-Eegista Dastuurka. Kulanka oo ka dhacay xarunta Aqalka Sare ayaa waxaa ugu horeeyn Wasiirka iyo Xubnahii la socday soo dhaweeyay Gudoomiyaha Guddiga Senator Cabdi […]
Dowladda federaalka oo oggaalatay xil ka qaadiska madaxweynaha Hirshabeelle
Muqdisho (RBC Radio) Dowladda federaalka ayaa soo gabgabeysay khilafkii ka taagna maamulka Hirshabeelle,markii dowladdu ay taageertay go’aanka uu Baarlamaanka xilka uga qaaday madaxweynaha maamulka Cali Cabdullaahi Cosoble. Guddi wasiirro ah oo ay dowladda dhawaan u dirtay Jowhar ayaa maanta soo bandhigay mowqifka dowladda,waxaanna ay sheegeen inay aqbaleen xilka qaadiska uu Baarlamaanka ku sameeyay madaxweyne Cosoble. War […]
Madaxweyne Farmaajo oo safarkii 12 -aad ku aaday dalka Masar
Muqdisho (RBC Radio) Madaxweynaha Soomaaliya,Maxamed Cabdullaahi Farmaajo oo ay waheliyaan mas’uuliyiin dowladda ka tirsan ayaa saakay u dhoofay dalka Masar,kaddib casuumaad uu ka helay madaxweynaha dalkaas, Abdulfataax Al Sisi. Labada Madaxweyne ayaa ka wada hadli doona adkeynta xiriirka soojireenka ah ee labada dal iyo iskaashiga dhinacyada Waxbarashada, Beeraha, Socdaalka, Duulista Hawada iyo Tamarta iyo Biyaha,sida u sheegay Agaasimaha Warfaafinta […]
Xaalad deganaasho ah oo ka jirta degmada Buuhoodle dagaalkii shalay kaddib
Gaalkacyo (RBC Radio) Buuhoodle oo shalay ay ku dagaallameen labo qabaa’il oo deegaanka ah ayaa saakay deggan,waxaanna socda dadaallo ay hor-kacayaan waxgaradka iyo odayaasha deegaanka si loo soo afjaro khilaafka u dhaxeeya labada dhinac ee dagaallamay. Dagaalka shalay ayaa ku billoowday kaddib markii maleeshiyaad hubeysan ay magaalada dhaxdeeda ku dileen nin ka mida dadka deegaanka ,iyadoo maleeshiyaad kale oo falkaas ka […]
Xildhibaan Dalxa “Federaalka micnaha iyo ujeedka laga lahaa meel ka baxsan am aka sii duwan ayuu u muuqda inuu ku socda”
Muqdisho (RBC Radio) Xildhibaan Maxamed Cumar Dalxa oo ka mid ah Baarlamaanka federaalka ayaa sheegay nidaamka federaalka inuu hadda ku socdo meel qaldan. Xildhibaanka ayaa sheegay awooda dowladda dhexe iyo dowlad-gobolleedyada inay noqotay mid siman,isagoo marka sheegay mar haddii dowlad-gobolleed uu xiriir u jari karo dal kale ama la heshiin karo,taasi inay ku tusineyso sida […]
Booliska jazeerada Malta oo xiray labo nin oo Soomaali ah
Muqdisho (RBC Radio) Booliska jazeerada Malta, waxaa ay xireen labo nin oo Soomaali ah,kuwaaso loo heysto falal xatooyo ah. Sarkaal ka tirsan booliska ayaa u sheegay warbaahinta magacyada labada nin oo lugu kala magacaabo, Shaban Adan Jama oo 21-jir ah iyo Maxamed Xabiib Xaashi oo 22 jir ah. Maxkamad ku taalla jazeerada ayaa diidey isku-dey uu […]
Howlgallo ka socda gobolka Shabeellaha hoose
Muqdisho (RBC Radio) Ciidamada dowladda ayaa howlgallo ka wada deegaanno ka tirsan gobolka Shabeellaha hoose,kaddib markii shalay ku dagaallameen deegaanno gobolka ka tirsan al-Shabaab iyo dowladda. Guddoomiye ku-xigeenka gobolka Shabeellaha hoose Cabdifitaax Xaaji Cabdulle, oo faah faahin ka bixiyay howlgalka wuxuu sheegay in la xaqiijinayo ammaanka gobolka. Guddoomiyaha wuxuu inta ku darray howlgalka inuu socon doonno […]
Page 1 of 482123Next ›Last »